ရှပ်တပ်ယာဉ်ပေါ့ကွာ… Shameful | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ရှပ်တပ်ယာဉ်ပေါ့ကွာ… Shameful
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 6, 2015 in Critic, Myanma News | 10 comments
လျှပ်တပ်ယာဉ် လှည်းတေလို့ရပြီ ရွာဒဲဂ ဆိတ်စွမ်းအား ရှင်ဒို့…။ ဟီ ဟိ..
ဆူပူရမ်းကား ကျောင်းသားလို့ ပြောဦးမလား..
မလျှပ်တပ်ယာဉ်ဒေါ့ ဆိတ်နဲ့ ကြိတ်ထောက်ခံဂျဦးပေါ့ကွာ.. ဂွိ ဂွိ…။
ရွာသား ရဲမူး ရာမညကတော့ ရဲတွေက တာဝံအရပါတဲ့။ စစ်သား ခိုင်းတာလုပ်တာတော့ ထည့်မပြောဘူး။ လူလိင် ယာမငြ….
ဓာတ်ပုံ ။ ဖဘတွင်တင်ထားသော myanmardaily.net နှင့် သိုးထိန်း အကောင့်များမှ..။
ထီမထင် ငါကွ ဦးကြောင်ကြီး
ဘယ်တုံးကပုံတွေလဲ… မနေ့က ရန်ကုန်မာနဲနဲပွဲဆူတယ်ကြားတယ်
ဖဘ အကောင့်ပိတ်ထားလို့ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်..
ကို​ကြောင်​ဂျီး အ​မေဒစ်​ကံက​နေ ​လေတိုက်​မ​နေနဲ့ သတ်​တိယှိရင်​ ​နေပူ​ဒေါ်လာပီး တဂို​ဒေါ် ဆန်​ဒ ပြလှဲ့
ဦးကြောင်က အမေဒစ်ဆီမှာမဟုတ်… ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ထားတယ် သူ့နေရာတဲ့နေရာကို GPS နဲ့ ရှာကြည့်လိုက် တွေ့ရလိမ့်မယ်…
ကျနော် နိုင်ငံရေး ဆိုတာကို သိပ်နားလည် တဲ့ထဲမှာ မပါပါဘူးး…
တွဲရေးခွဲရေး ဘယ်လိုလုပ်မှ နိုင်ငံကြီး တိုးတက်မယ် ကောင်းသွားမယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ထဲလည်း မပါဘူးးး…
အဲ!!! ဒါပေမဲ့ ………
အစိုးရ နဲ့ အတိုက်အခံ အားပြိုင်မှုတွေ၊ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူ့အရေးအခင်း အားစမ်းပွဲတွေမှာတော့………
လစ်ဘရယ် ယောင်ယောင် ခြံစည်းရိုးပေါ် တက်ထိုင်ပြီး ၂ ဖက်လုံးကို စောင့်ကြည့်ပြီး ဝေဖန်မယ် ဆိုတဲ့ထဲတော့ မပါတာသေချာတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက် ခု ထမိန်ဝတ်အစိုးရ လက်ထက်ထိ ဒီ လုပ်ချင်ရာလုပ်စံနစ်/ဒီအာဏာတည်မြဲရေးစံ ကိုပဲ ပုံပြောင်း အသက်သွင်းပြီး သယ်လာခဲ့တာမို့ …
မတရားမှုမှန်သမျှ သူတို့ချည်း ကန်ထရိုက်ဆွဲပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် ဇွတ်ယူထားတာမို့ …
ဟန်ဒီးကက် မပေးချင်လည်း ပေးထားခဲ့ရတဲ့ စစ်တစ်ပိုင်း အစိုးရနဲ့
ဖက်ဖြစ်ရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို တန်းတူထားပြီး မစဉ်းစားပေးနိုင်တာလည်း အသေအချာပဲ။
ကြားနေဆိုတာ အင်အားငယ်သူဘက်က မပါချင်တာမို့ အင်အားကြီးဘက်ကလည်း တရားဝင် မပါရဲတာမို့ ကြားနေတယ်လို့ပဲ တွေးတယ်။
ဆိုတော့ …… အစွန်းနင်းတယ်ဆိုလည်း နင်းတယ်ပေါ့။
ဘာလို့ဆို ဟိုဘက်တစ်ဖက်မှာ အာဏာရှင် အစွန်းရှိတယ်။
အာဏာရှင် အစွန်းဘက်ကို ဦးတည်ပြီး အချိန်မရွေး ပါသွားနိုင်တဲ့ ကြားနေဆိုတဲ့ တရားမဝင် အင်အားစု တွေ အလယ်ဘက် နား နီးနီးမှာရှိမယ်။
ကျနော် ကတော့ ဒီ စစ်အစိုးရကို ဘယ်နည်းနဲ့မဆို ဆန့်ကျင်တာကို အားပေးမဲ့၊ ထောက်ခံမဲ့ အစွန်းကို နင်းပါတယ်။
ခြေမမကောင်းခြေမ၊ လက်မ မကောင်း လက်မ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ဒီ အစိုးရ အတွက် မရှိပါ။။
ရှိဖို့ မထိုက်တန်လှဘူးလို့ပဲ ယူဆပါတယ်။
.ကေရဲ့ စိတ်တွင်း ပဋိပက္ခပေါ့လေ။ မတို့ မြင်နေပုံက ဒီလို။ မြင်ရတွေ့ရ ရင်ဝမချိ ပို့စ်မှာ အဘနီ မှန်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဘနီ ပြောတာက ကျန်တဲ့လူတွေ အတွက် ကြောင်စီစီဖြစ်ချင်စရာကြီး။ ဘာမှလည်း မဆိုင်ဘူးလို့ တွေးစရာကြီးပေါ့။ အဘနီ ပြောတာက အခုမှ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး သို့မဟုတ် လစ်ဗြဲနဲ့ ကွန်တစ် အားပြိုင်ကြပြီ၊ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ ပြောချင်တဲ့ သဘောပါပဲ။
.ကွန်တစ်က လူပြောင်းရေးကို ဦးစားပေးတယ်။ ခေါင်းဆောင်ပေါ်ကို ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တယ်။ လစ်ဗြဲက ဖြစ်စဉ်ကို ဦးစားပေးတယ်။ အသွင်ပြောင်းစတိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်စဉ်မှန်ဖို့ လိုတယ်လို့ ယုံတယ်။ အဲဒါ နှစ်ခုကွဲနေတာပါပဲကွယ်။ လူယုတ်မာ သူတော်ကောင်း နှစ်ခြမ်းကွဲတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
စစ်အရောင်ပြောင်း ခေါင်းပေါင်းဝတ်တွေကို စထဲကလဲ မယုံဘူး ဘယ်တော့မှလဲ ယုံမှာမဟုတ်ဘူး။
သူတို့တွေ ဇာတ်ခုံပေါ်က ဆင်းကြမယ်ဆို ဘင်ခရာဌားပြီးတောင် လိုက်ပို့ပေးအုံးမယ်။
ဒီ စစ်အစိုးရ ဆီ က ဘာတွေများ ကောင်း တာ မှန်း နေ တာလဲ ကြောင်ကြောင်။
ဒီ လူ တွေ ကို မယုံလို့ ဒီ လူ တွေ ကို ဖယ်ဖို့ တော့ မကြိုးစားဘဲ
ဖယ်ဖို့ အခွင့် ရနေပြီ ကို အာရုံမစိုက်ဘဲ …..
သူတို့ နဲ့ ပြိုင် ကိုက် နေတာ ကတော့ ……..
စိတ် ဓာတ် တူရာ ချင်း အတ္တပြိုင်တဲ့ ပွဲ ဘဲ။
မြန်မာစာ အဘိဓာတ် ရှာဖတ်လိုက်ရတယ်။